समुद्रशास्त्र अनुसार यस्तो आकारको अनुहार भएका महिलाहरु हुन्छन् संसारकै भाग्यमानी! – Khabar Silo
समुद्रशास्त्र अनुसार यस्तो आकारको अनुहार भएका महिलाहरु हुन्छन् संसारकै भाग्यमानी!
सोमबार धेरै नारीहरु व्रत बस्छन् । सोमबारको व्रत बस्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ । सोमबारको दिन देवताको पनि देवता आरध्यदेव महादेवको पूजा गरिन्छ । अविवाहित नारीले सुयोग्य बर तथा विवाहिताले पतिको दीर्घायूको कामनासहित भगवान शिवको पूजा आरधना गरिन्छ । यो दिन सेतो रंगको कपडा लगाउने र सेतै रंगको वस्तुहरुको दान गरेमा विशेष फल प्राप्त […]
यी राशि हुनेका लागि चाँदी हुन्छ अत्यन्तै शुभ, हुनेछ धनको वर्षा!
ज्योतिषशास्त्रमा चाँदी चन्द्रमा र शुक्र ग्रहसँग सम्बन्धित छ । चाँदी धारण गर्दा जल तत्व र धातु नियन्त्रण हुन्छ। चाँदी लगाउँदा हाम्रो क्रोधलाई पनि कम गर्छ। धर्मशास्त्रका अनुसार यो भगवान शिवशंकरको आँखाबाट उद्भव भएको थियो। चाँदी मध्य मूल्यवान भएकाले यसको प्रयोग धेरै हुन्छ। चाँदी एक चम्किलो र सेतो धातु हो जुन हाम्रो जीवनमा दैनिक प्रयोग हुने […]